लिग खेल्ने नखेल्ने निर्णय लिएको छैन - किरण चेम्जोङ
आइतबार​, मंसिर १९ २०७८ ०७:४१ PM
बिहीबार २५ कात्तिक २०७८ ०५:५० PM
देशकै शीर्ष डिभिजनको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग ३ मंसिरबाट सुरू हुँदै छ । कुल १४ टोलीको सहभागीता रहने फुटबल लिग नजिकिँदै गर्दा सम्पूर्ण टोलीहरू तयारीमा व्यस्त छन् भने कति क्लबलाई अझै पनि खेलाडी अनुबन्धनमा भ्याइनभ्याइ छ । लिगको तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । दशरथ रंगशालामा ‘फ्लड लाइट’मा हुने उद्घाटन खेलमा फ्रेण्ड्स क्लब र नव प्रवेशी क्लब सातदोबाटो युथ भिड्नेछन् ।
२८ वर्षपछि नेपाललाई पहिलो पटक क्षेत्रीय प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनपसिपमा फाइनलमा पुर्‍याएका कप्तान किरण ३ मंसिरबाट सुरू हुने लिगमा कुन क्लबमा आवद्ध हुँदै छन् ? लिग खेल्ने या नखेल्ने के योजना बनाएका छन् ? ‘ट्रान्सपर मार्केट’ मा मूल्यवृद्धिका कारण अन्य क्लबले वास्ता नगर्नुलगायत समसामयिक विषयमा नेपाली टोलीका कप्तान किरण कुमार लिम्बू (चेम्जोङ)सँग न्युज कारखानाकर्मी रमेश सुवेदीले गरेकाे कुराकानी
सरकारले सार्थक पहल गरेन भने न्यायपालिका ‘कोल्याप्स’ हुने स्थितिमा जान्छ : महेश नेपाल/वरिष्ठ अधिवक्ता (अन्तर्वार्ता)